သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒနှင့်ကွတ်ကီးမူဝါဒ | RayHaber | raillynews
အောက်ပါ "လျှို့ဝှက်သဘောတူညီမှု", RayHaberကျွန်ုပ်တို့၏တန်ဖိုးထားသုံးစွဲသူများအားပေးအပ်သည့်သတင်းအချက်အလက်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများအားထောက်ပံ့ပေးသည်။
RayHaber ဆိုက်ပေါ်တွင်ပုံစံများကိုဖြည့်စွက်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖြည့်စွက်ခြင်းခံရသောမည်သည့်အသုံးပြုသူမဆို“ မူပိုင်ခွင့်အချက်အလက်”၊ “ သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒ” နှင့် larartlar အသုံးပြုမှုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းချက်များကိုဖတ်ပြီးလက်ခံသည်ဟုမှတ်ယူရမည်။
RayHaberခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုမျိုးစုံအတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့လာရောက်လည်ပတ်သူမှတ်ပုံတင်ထားသော guest ည့်သည်များမှကောက်ယူထားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ RayHaber ဤအချက်အလက်များကိုစီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်မျှဝေပါ။ သို့သော်၊ အီးမေးလ်နှင့်အခြားကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုသူ၏သဘောတူညီမှုမပါဘဲမည်သည့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၊ ကုမ္ပဏီ၊ အဖွဲ့အစည်းသို့မဟုတ်အခြားအဖွဲ့အစည်းနှင့်မျှဝေမျှလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
RayHaber အီးမေးလ်၊ အမည်၊ နာမည်၊ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်နှင့်မှတ်ပုံတင်စဉ်အတွင်းထည့်သွင်းထားသောမည်သည့်အချက်အလက်ကိုမဆိုမှတ်ပုံတင်ထားသော guest ည့်သည်အသုံးပြုသူများ၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်မထုတ်ပြန်ရ။
RayHaber3သည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအောက်ပါဥပဒေရေးရာအခြေအနေများနှင့်တရားဝင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအောက်တွင်သာဖော်ပြလိမ့်မည်။ ပါတီများမှဖွင့်လှစ်။
တစ်ဦး။ ) စာဖြင့်ရေးသားတောငျးဆိုခကျြမြား၏အမှု၌ဤအမှု၌တရားဥပဒေဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များအနေဖြင့်
ခ။ ) RayHaber၏ပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများကိုကာကွယ်ရန်နှင့်ကာကွယ်ရန်
RayHaberသင်၏သိမ်းဆည်းထားသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုသင်သာမြင်နိုင်သည် ဤအချက်အလက်သည်အခြားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနှင့်လည်းရောင်း၊ ငှား၊ သို့မဟုတ်လဲလှယ်ခြင်းမရှိပါ။ ဤ“ လျှို့ဝှက်စာချုပ်” တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း မှလွဲ၍3။ တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်အတူမျှဝေဘူး။ RayHaber ဒီစာချုပ်ထဲမှာကတိထားတော်အခြေအနေများဖြည့်ဆည်းရန်အားလုံးဖြစ်နိုင်သမျှအစီအမံကြာပါသည်။
RayHaber အများပိုင်မဟုတ်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင်သိမ်းဆည်းထားသောသတင်းအချက်အလက်။ RayHaberပတ်ဝန်းကျင်တွင်သတင်းအချက်အလက်များကိုကာကွယ်ရန်စက်မှုလုပ်ငန်းစံချိန်စံညွှန်းအမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုသည်။
သင်မှတ်ပုံတင်နေစဉ်အတွင်းသင်ရိုက်ထည့်သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအချိန်မရွေးပြင်ဆင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ RayHaber အကယ်၍ သင်သည်ဤ“ လျှို့ဝှက်စာချုပ်” နှင့်“ ဝန်ဆောင်မှုသဘောတူညီချက်” ကိုမလိုက်နာပါကသင့်အကောင့်ကိုဖျက်သိမ်းခွင့်သို့မဟုတ်ဆိုင်းငံ့ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
အင်တာနက်၏သဘောသဘာဝအရသတင်းအချက်အလက်များကိုလုံလောက်သောလုံခြုံရေးအစီအမံများမရှိပဲအင်တာနက်ပေါ်တွင်ဖြန့်ဝေနိုင်သည်။ ဒီအသုံးပြုမှုနှင့်အသုံးပြုမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု RayHaber၏တာဝန်မဟုတ်ပါဘူး။
အချို့ကိစ္စများတွင်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမဟုတ်သောအချက်အလက်များကိုကောက်ယူနိုင်သည်။ သင်အသုံးပြုသောအင်တာနက်ဘရောင်ဇာအမျိုးအစား၊ သင်၏လည်ပတ်မှုစနစ်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုဒ်နှင့်ချိတ်ဆက်လိပ်စာသို့မဟုတ်ဆိုက်၏ဒိုမိန်းအမည်ဥပမာအားဖြင့်ဤအချက်အလက်အမျိုးအစားကိုကြော်ငြာဖြင့်ပေးနိုင်ပါသည်။
ဆိုက်ကိုသင်လည်ပတ်သောအခါသတင်းအချက်အလက်များကိုသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ထည့်ထားနိုင်သည်။ ဤအချက်အလက်သည် cookie သို့မဟုတ်အလားတူဖိုင်ပုံစံဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုနည်းလမ်းများစွာဖြင့်ကူညီလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကွတ်ကီးများကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ကြော်ငြာများကိုသင့်ရဲ့စိတ် ၀ င်စားမှုနှင့် ဦး စားပေးမှုများနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ အင်တာနက်ဘရောင်ဇာအားလုံးနီးပါးသည်သင်၏ hard disk မှ cookies များကိုဖျက်ရန်သို့မဟုတ်၎င်းတို့ကိုမသိမ်းမီသတိပေးစာများလက်ခံရန်ရွေးချယ်စရာများရှိသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏ browser ၏အကူအညီဖိုင်များနှင့်အသုံးပြုမှုအချက်အလက်များကိုကြည့်ပါ။
သင်၏ IP လိပ်စာကိုဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆာဗာများအားပြrunningနာများကိုစီမံရန်၊ စီမံရန်နှင့်ဖြေရှင်းရန်အသုံးပြုသည်။ သင်၏ IP လိပ်စာသည်သင့်အားခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်အသုံးပြုသည်။
ဒါဟာ web site ကိုအခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များလင့်များပေးပါသည်။ လျှို့ဝှက်ဒီ web site ကိုသာရရှိနိုင်ပါသည်နှင့်အခြားက်ဘ်ဆိုဒ်ကိုဖုံးလွှမ်းမထားဘူး။ ဒီ website အသုံးပြုခြင်းကိုလျှို့ဝှက်သဘောတူညီချက်နဲ့သုံးစွဲမှုစည်းမျဉ်းများလျှောက်ထားရန်နှင့်ဆက်စပ်သောအခြားသော website ပေါ်မှာ site ကိုမှလင့်ခ်နှင့်အတူသွားကြဖို့ပိုငျဆိုငျ။ သင်သုံးစွဲမှုဝက်ဘ်ဆိုက်သတ်မှတ်ချက်များပင်မစာမျက်နှာနှင့်သီးသန့်လုံခြုံရေးအာမခံချက်တွေ့ရှိချက်ကနေကိုလင့်ထားသောစာမျက်နှာများကိုသွားအဲဒီကအခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုသင်ကစာသားကိုဖတ်ရှုဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည် '' အသုံးပြုမှု, အီးမေးလ်လိပ်စာများများအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီသတင်းအချက်အလက်တစ်လမ်းအတွက် site ကိုဧည့်သည် profile များကိုများ၏စာရင်းဇယားတတိယပါတီနှင့်အတူမျှဝေတာပါ။
ကြားခံ (ပြည်သူ့အစိုးရရှေ့နေတွေရဲ့ရုံး, ရဲတပ်ဖွဲ့ပြန်ကြားရေးဗျူရို) ၏တရားဝင် site ကိုမှအပေါ် Log လျှောက်လွှာစေခြင်းငှါ မှလွဲ. လျှို့ဝှက်စောင့်လေ၏။ Access ကိုသစ်လုံး 180 နေ့ရက်ကာလအဘို့သိုထားနေကြသည်။
comments ည့်သည်၏မှတ်ချက်များ၊ membership ည့်သည်အသင်း ၀ င်အချက်အလက်၊ ၀ င်ရောက်သတင်းအချက်အလက် (IP, timestamp, useragent) သည်သတင်းစနစ် ၀ န်ထမ်းများအပါအ ၀ င်လျှို့ဝှက်ထားသည်။RayHaber ဤစာသားပါအချက်အလက်များကိုပြောင်းလဲပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဤ“ သီးသန့်တည်ရှိမှုအာမခံချက်” ကိုသင်ပြောင်းလဲမှုအားလုံးကိုလက်ခံခဲ့သည်ဟုမှတ်ယူသည်။
ကုဒ်၊ သတင်း၊ ဓာတ်ပုံ၊ အင်တာဗျူးစသည့်အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုး၏မူပိုင်ခွင့်များ RayHaber.com ။ RayHaberဆောင်းပါးများ၊ ပစ္စည်းများ၊ ရုပ်ပုံများ၊ အသံဖိုင်များ၊ ကာတွန်းကားများ၊ ဗီဒီယိုများ၊ ဒီဇိုင်းများနှင့် .com site ရှိအစီအစဉ်များကိုမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေ 5846 ဖြင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ဤ RayHaber.com ကူးယူခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ .com ၏ရေးသားထားသောခွင့်ပြုချက်မရဘဲမည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုထုတ်ဝေခြင်းမပြုနိုင်ပါ။ ကူးယူခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းကိုခွင့်ပြုချက်မရှိပဲနှင့်အရင်းအမြစ်ကိုသတ်မှတ်ခြင်းမရှိဘဲ ပြုလုပ်၍ မရပါ။
RayHaber သင်နှင့်သင်၏ visitors ည့်သည်များ၏ privacy ကိုလေးစားပြီးအောက်ဖော်ပြပါစည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာရန်ကတိပေးထားသည်။
© Copyright 2020 RayHaber.com အားလုံးမူပိုင်ခွင့်များ။
မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်တစ်ရက်နှင့်အတူသီးသန့်လုံခြုံရေးအလင်းရထားစီမံကိန်းအားဆီသို့ရောက် လာ. ,
အတူတူရောက်ရှိခဲ့သည်ဖြစ်လာနိုင်ငံတော်မီးရထား AK ပါတီမူဝါဒနှင့်အတူ
ဝန်ကြီး Arslan: "ကျနော်တို့ပြည်နယ်မီးရထား၏ဖြစ်လာရေးမူဝါဒယူခဲ့"
Bursa Yenişehirမြန်နှုန်းရထားစာချုပ် ANN-Hill ကမိတ်ဖက်နှင့်အတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်
Konya Cable ကိုကားလိုင်းစီမံကိန်းစာချုပ်လက်မှတ်ထိုး
Uzungöl'de Cable ကိုကားလိုင်းစာချုပ်လက်မှတ်ထိုး
တူရကီက Metro စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါပြီ